“Kulanka aan la ciyaareyno Chelsea ma ahan mid Saaxiibtinimo.”. Arsene Wenger oo boolo xoofteenaya – Gool FM
“Kulanka aan la ciyaareyno Chelsea ma ahan mid Saaxiibtinimo.”. Arsene Wenger oo boolo xoofteenaya
Byare July 22, 2017
(Beijing) 22 Luulyo 2017. Arsenal iyo Chelsea ayaa maanta duhurkii kulan saaxiibtinimo ku yeelan doona caasimada Beijing ee dalka Shiinaha laakiin tababare Arsene Wenger isagu wuxuu qabaa in kulanku saaxiitinimo ka badan yahay.
Gunners ayaa markale wajihi doonta Blues bisha August kolkaa ay isku qaban doonaan Community Shield ka hor inta aysan isku food saarin horyaalka Premier League.
“Way adag tahay in la saadaaliyo laakiin waa kulan saaxiibtinimo oo u dhaxeeya Arsenal iyo Chelsea, taa waxay la micno tahay inuusan kulanku dhab ahaan ahayn mid saaxiibtinimo waxaa jirta sharaf loo dagaalamayo iyo rabitaan guuleed.” Wenger ayaa sidaa yiri.
“Kulan xiiso leh ayuu ahaa fina kii FA Cup, waxaan la ciyaari doonaa iyaga Community Shield sidoo kale waxaan la ciyaari doonaa horaanta Premier League 17-da bisha September.
“Xaqiiqdii si fiican ayaan isku garaneynaa wayna adag tahay in la ogaado inta uu la eg yahay diyaar garowga Chelsea iyo ilaa iminka intuu yahay diyaar garowgeena.
“Tusmo fiican ayuu ahaa kulankii aan ku wajahnay Bayern Munich ee bar-baraha 1-1 kaddib aan uga adkaanay rigoorayaal 3-2, tijaabo kale ayuu noo ahaan doonaa kulanka maanta.
Arsene Wenger ayaa xaqiijiyay inuu shaki ku jiro taam ahaanshiyaha Theo Walcott, halka daafaca Laurent Koscielny uu filanayo inuu kulanka ka soo muuqdo iyadoo ay jirto dhibaato uu dhabarka ka qabo.
''Ma jiraan dalabyo ka yimi Inter ama Juventus oo ku wajahan Keita Baldé Diao.'' - Madaxwaynaha Lazio